चावी अर्थको कुरा खेलकुदको - Pokhara Sports
Home/अन्य खेलकूद/चावी अर्थको कुरा खेलकुदको
पोखरा स्पोर्टस ९ कार्तिक २०७७, आईतवार
केशव पाठक/पोखरा स्पोर्टस । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हुन किरण गुरुङ । खरो वोल्ने र नेताको रुपमा परिचित मन्त्री गुरुङ यतिवेला सामाजिक सञ्जालमा उनले लेख्ने स्टाटसले पनि पनि निकै चर्चाको विषय हुने गरेका छन् ।
आफ्नो वारेमा कहिँ कतैवाट सुने पनि त्यसको जवाफ तत्कालै आफ्ना विरोधीलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत कडा शव्दमा प्रहार गरि हाल्छन । चाहे त्यो पार्टीको नेता होस वा कुनै मन्त्री । उनका धेरै स्टाटस मध्ये यति वेला खेलकुदको स्टाटस निकै चर्चा वटुलेको छ । खेलप्रती नकारात्मक टिप्पणी गर्नेहरुलाई उनले यसो भन्छन–“ मानसिक तनावबाट मुक्त हुन तथा खुराफाती दिमाग र नकारात्मक सोंचबाट मुक्त हुन एवं लोभ, ईर्ष्या र डाहाको तापबाट आफै जलेर भष्म हुनबाट जोगिन हामी सबै कथित–ठुला, साना, ज्ञानी, अज्ञानी, धनी मानीहरू सबै खेल र शारीरिक व्ययाममा लागौं ।”
“जीवनमा शान्ति र समृद्धि ल्याउँछु भनेर धर्म, कर्म, यज्ञ, महायज्ञ आदि इत्यादि तिर लाग्नु पर्दैन, बस् ! दिनको दुई घण्टा समय निकाल्नु होस्, व्यायाम गर्नुहोस्, शारीरिक र मानसिकरूपमा स्वस्थ भएपछि जिन्दगीले धन सम्पति र ऐस आराम सबै प्राप्त गर्छ ।”
मन्त्री गुरुङलाई खेलकुदमा पुर्याउने व्यक्ती भनेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यका सम्पन्न श्रेष्ठ हुन । श्रेष्ठ तत्कालिन पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय खेलकुद विकास समितीका अध्यक्ष थिए । मन्त्री गुरुङ वारे श्रेष्ठ भन्छन–“उहाँ त्यती वेला शारिरिकरुपमा अस्वस्थ हुनुहुन्थ्यो, चिकित्सकले शारिरिक व्ययाम गर्न सुझाव दिएका थिए, त्यसै क्रममा म सँग भेट भयो मैले नै उहाँलाई स्क्वास खेल्न पोखरा रंगशाला आउन सल्लाह दिए, त्यहाँ देखि यता मन्त्रीज्यूले पछि फर्केर हेर्नु भएको छैन, त्यसैले पनि उहाँ शारिरिक रुपमा निकै स्वस्थ्य देखिनुभएको छ, यो खेलकुदका लागि सकारात्मक सन्देश हो ।”
“मानसिक तनावबाट मुक्त हुन तथा खुराफाती दिमाग र नकारात्मक सोंचबाट मुक्त हुन एवंलोभ, इर्ष्या र डाहाको तापबाट आफै जलेर भस्म हुनबाट जोगिन हामी सबै कथित–ठुला, साना, ज्ञानी, अज्ञानी, धनी मानीहरू सबै खेल र शारीरिक व्ययाममा लागौं ।”
मन्त्रालय र पार्टीको कामवाट फुर्सद पाउने वित्तिकै मन्त्री गुरुङको समय पोखरा रंगशालामा वित्छ । स्वाक्वास खेल प्रती उनको रुची सँगै रंगशाला भित्र मार्शलआर्ट खेलका लागि प्रयोग हुने शारिरिक व्यायामका साधनहरुमा उनी लामो समय अभ्यास गर्छन । उनको खेलप्रतीको रुची हेर्दा लाग्छ मानौ प्रदेश सरकारको करौडौको बजेट खेलकुदका लागि खर्च हुँदैछ । वास्तविकता त्यस्तो पनि होइन । प्रदेशको चालु वजेट खेलकुदको हेर्ने हो भने करिव १० करोड मात्रै हो । यो बजेट वागमती प्रदेशको चालु खेलकुद बजेटको १० प्रतिशत मात्रै हो । अर्थको चावी भएर पनि खेलकुदको बजेट प्रदेशको न्युन हो । तर प्रदेश सरकार आफ्नो तर्फवाट खेलकुदको पूर्वाधार विकासका लागि भने प्रतिवद्ध रहेको सुनिंदै र देखिंदै आएको छ ।
मन्त्री गुरुङले खेलकुदलाई यसरी व्यख्या गर्छन–“निश्चय पनि खेलकुद राष्ट्र र राष्ट्रिय समृद्धिको लागि मात्र होइन, जनताको स्वास्थ्यको निम्ति हो । मानिसको शारीरिक र मानसिक विकासको निम्ति खेलकुदको आवश्यकता पर्छ ।” सायद आफू सँधै शारिरिक व्ययाम गर्ने भएकोले होला स्वस्थ्य शरिरले नै समाज र राष्ट्रको समृद्धी हुन्छ भन्ने सोच उनमा छ । भनिन्छ नि धेरै अस्पताल निर्माण गर्नु भन्दा राम्रा २–४ वटा खेलकुदका पुर्वाधार निर्माण गर । सायद मन्त्री गुरुङका लागि यिनै शव्दले पनि खेलकुद कति धेरै आवश्यक छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न खोजिरहेका छन ।
“बुद्धिले काम गर्छु भन्ने बुद्धिजीवीहरू, धन कमाएर समृद्धि ल्याउँछु भन्ने व्यापारी–व्यवसायीहरू, देश बनाउँछु भन्ने राजनीतिज्ञहरू, जिन्दगीमा केही उन्नति प्रगति गर्न सकिएन भन्नेहरू–जो संधै मानसिक तनावमा रहन्छन्, शारीरिक व्ययाम या खेल सबैभन्दा बढी तिनीहरूलाई आवश्यक पर्छ ।”
खेलकुदलाई जिवनको अभिन्न अंग बनाउनु पर्छ भन्नेमा मन्त्री गुरुङ प्रतिवद्ध छन । उनी भन्छन–“हाम्रो शारीरिक स्वस्थताको लागि मात्र होइन, त्योभन्दा पनि बढी मानसिक स्वस्थताको लागि खेल अर्थात शारीरिक व्यायामको आवश्यकता पर्दछ । यो मानिसको जीवन र जीवन यापनको अभिन्न अङ्ग हो र त्यसैले हाम्रो जीवनशैली बन्नुपर्छ ।” उनले भनेका छन–“जीवनलाई सधैं सकारात्मक उर्जा प्रदान गर्छ । सकारात्मक सोंचका लागि फुर्सदको समयमा हुनेनहुने सोंचेर बस्नुभन्दा तपाईंको वरिपरि जे उपलब्ध हुन सक्छ, त्यही खेल र व्यायाम गर्नुहोस् ।”
अहिलेको २१ औं शताव्दीको व्यस्त र ‘भर्चुअल लाइफ’लाई उनले तिखो व्यङ्ग प्रहार मात्रै गरेका छैनन खेल खेल्यो भनेर विग्रिन्छ भन्ने मानसिकता त्याग्न पनि उनले आग्रह गरेका छन । ‘खेले भने बिग्रे’ भन्ने धारणा त्याग्न उनले आग्रह गर्दै भन्छन–“खेलेर पढाइ बिग्रिदैंन न त देश बिग्रिन्छ, न समाज बिग्रन्छ । के बालक, के युवा, के बुढाबुढी सबैलाई शारीरिक र मानसिक विकास र स्वस्थताका लागि खेलकुद या शारीरिक व्यायामको आवश्यकता छ ।”
“खेल खेलेकोमा नकारात्मक टिप्पणी गर्ने लघुचित्तका आह्रिसेहरू तपाईहरू पनि दिनको २४ घण्टामा कम्तिमा २ घण्टा समय निकालेर खेल या व्ययाम गर्नुहोस्–अर्काको रिसमा जलेर नबस्नु होस् ।”
मन्त्री गुरुङले आफ्नो भनाईमा सामाजका हरेक तप्का व्यक्तिहरुलाई खेलकुदप्रतिको नकारात्मक सोच परिवर्तन गर्न आग्रह गरेका छन । उनले भनेका छन–“बुद्धिले काम गर्छु भन्ने बुद्धिजीवीहरू, धन कमाएर समृद्धि ल्याउँछु भन्ने व्यापारी–व्यवसायीहरू, देश बनाउँछु भन्ने राजनीतिज्ञहरू, जिन्दगीमा केही उन्नति प्रगति गर्न सकिएन भन्नेहरू–जो संधै मानसिक तनावमा रहन्छन्, शारीरिक व्यायाम या खेल सबैभन्दा बढी तिनीहरूलाई आवश्यक पर्छ ।” उनले सबैलाई आफ्नो जिउने शैली अलिकति भएपनी परिवर्तन गर्दै खेलकुदलाई माया गर्न तथा त्यस प्रती रुची वढाउन भनेका छन ।
कोरोनावाट वाँच्न हरेक व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने ‘इम्युन पावर’ वढाउन शारिरिक व्ययाम जस्तो अचुक औषधी अरु केही छैन । त्यसैले पनि हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो शारिरिक शक्ती सँगै रोग सँग लड्ने क्षमता बढाउन मन्त्री गुरुङका हरेक शव्दहरु चोटिलो मात्रै होइन जिवनको अङ्ग बनाउन आवश्यक छ ।
दिनको २ घन्टा शारिरिक व्ययामगर्न सबैलाई आह्वान गर्दै मन्त्री गुरुङले खेलकुदनै महायज्ञ तथा सवै भन्दा ठूलो धर्म हो भन्ने कुरालाई आत्मसाथ गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन । खेल खेल्दा नकारात्म टिप्पणी गर्नेहरुलाई भनेका छन–“खेल खेलेकोमा नकारात्मक टिप्पणी गर्ने लघुचित्तका आह्रिसेहरू तपाईहरू पनि दिनको २४ घण्टामा कम्तिमा २ घण्टा समय निकालेर खेल या व्यायाम गर्नुहोस्–अर्काको रिसमा जलेर नबस्नु होस् ।” उनले अगाडी भन्छन–“मानसिक तनावबाट मुक्त हुन तथा खुराफाती दिमाग र नकारात्मक सोंचबाट मुक्त हुन एवंलोभ, इर्ष्या र डाहाको तापबाट आफै जलेर भस्म हुनबाट जोगिन हामी सबै कथित–ठुला, साना, ज्ञानी, अज्ञानी, धनी मानीहरू सबै खेल र शारीरिक व्ययाममा लागौं ।” उनको स्टाटसका अन्तिम शव्दहरु यस्ता छन–“जीवनमा शान्ति र समृद्धि ल्याउँछु भनेर धर्म, कर्म, यज्ञ, महायज्ञ आदि इत्यादि तिर लाग्नु पर्दैन, बस् ! दिनको दुई घण्टा समय निकाल्नु होस्, व्यायाम गर्नुहोस् , शारीरिक र मानसिकरूपमा स्वस्थ भएपछि जिन्दगीले धन सम्पति र ऐस आराम सबै प्राप्त गर्छ ।”
कोभिड १९ को कहर जारि रहेकै वेला मन्त्री गुरुङको स्टाटस निकै अर्थपूर्ण छ । उनको यो स्टाटस नेपालीका लागि मात्रै नभई विश्वका सवै नागरिकका लागि सकारात्मक प्रभाव हो । कोरोनावाट वाँच्न हरेक व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने ‘इम्युन पावर’ वढाउन शारिरिक व्ययाम जस्तो अचुक औषधी अरु केही छैन । त्यसैले पनि हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो शारिरिक शक्ती सँगै रोग सँग लड्ने क्षमता बढाउन मन्त्री गुरुङका हरेक शव्दहरु चोटिलो मात्रै होइन जिवनको अङ्ग बनाउन आवश्यक छ ।
साग लक्षित ‘आर्ट वर्कसप’, विशिष्ट अतिथीलाई उपहार दिइने